မီးဖိုချောင်စက်ရုပ် - ဘယ်ဟာကိုငါရွေးသင့်သလဲ၊ မော်ဒယ်လ်နဲ့အားသာချက်တွေ။ | Bezzia
Susana godoy | 09/06/2021 16:00 | မီးဖိုခန်း
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုအများဆုံးမေးနိုင်သောမေးခွန်းများအနက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအမျိုးမျိုးသောမေးခွန်းများဖြစ်သည် မီးဖိုချောင်စက်ရုပ် ငါတို့စျေးကွက်ထဲမှာရှိသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံမှာငါတို့ရွေးချယ်ရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။ အဲဒါကိုမဖွင့်ခင်ဘာတွေကြည့်ရမှန်းမသိဘူး၊ ဒီတော့ဒီနေ့မင်းတို့ကမင်းကိုကူညီပေးမှာပါ။
အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များနှင့်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည် သင်၏ရွေးချယ်မှုသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့အားလုံးမှာတူညီတဲ့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကထာဝရတည်မြဲတဲ့ ၀ ယ်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကအကောင်းဆုံးလက်ထဲမှာရှိနေပြီးအခုမင်းတို့ပြတော့မယ်။
သင်စျေးကွက်တွင်ရှိသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာနှင့်မော်ဒယ်များစွာရှိသည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးအနက်သင်မဝယ်ယူမီအဆင့်အချို့ကိုအမြဲစဉ်းစားသင့်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာကြီးမားတဲ့အားသာချက်တွေရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါတွေကိုငါတို့ဘဝနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မီးဖိုချောင်သုံးစက်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်အခြေခံကျသောအချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကညစာစားပွဲတွေနဲ့အညီဒါကိုအကဲဖြတ်မှာပါ။ အကယ်၍ သင်သည်များသောအားဖြင့်စားရန်လူလေးယောက်ဖြစ်လျှင်အိမ်၌လူနှစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ် ဦး တည်းသာနေထိုင်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင့်တွင်လီတာပုံစံ ၂ မျိုးနှင့် ၅ လီတာရှိသည်။
ပါဝါသည်အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါဝါပိုများလေစွမ်းအားနဲ့ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်တာကြောင့်ပိုကြာရှည်ပြီးပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ပါ။ အချို့တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 500W ရှိပြီးအချို့မှာ 1000W ထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်။
၎င်းတွင်ရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်များသည်ကြည့်ရှုရန်အကြံဥာဏ်များနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အချို့တွင်လုပ်ဆောင်ချက် ၁၂ ခုနှင့်အခြား ၈ ခုကျော်ရှိသည်။ ကောင်းတဲ့အရာကဘယ်သယ်ဆောင်လာသလဲဆိုတာကိုသိပြီးသင်ပြင်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ဟင်းလျာပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့နဲ့အတူလာမလားဆိုတာကိုသိဖို့ပါ။ အခြေခံအကျဆုံးပုံစံများတွင်အဓိကနှင့်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။
အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူစေရန် (သို့) သူတို့သည်ပန်းကန်ဆေးစက်သို့သွားနိုင်သည်။အမြဲတမ်းအချိန်ချွေတာ
ပထမနေရာမှာ Cecotec Mambo စက်ရုပ်ဖြစ်သည် ၎င်းတွင်လုပ်ဆောင်ချက် ၃၀ ရှိပြီးစွမ်းဆောင်ရည် ၃.၃ လီတာနှင့်စာရွက်စာတမ်းစာအုပ်တစ်လုံးပါ ၀ င်သည်။ သင့်ကိုကူညီမယ့်သူတစ်ယောက်လိုအပ်ရင်ဝယ်ဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့ ဒီမှာ.
ဒါပေါ့ သငျသညျသေးအနည်းငယ်ပိုငွေကိုကယ်တင်လိုလျှင် ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဘေးမှာကြီးစွာသောရွေးချယ်စရာရှိသည်, သင်မြင်နိုင်ပါသည်သောဤမော်ဒယ်ရှိပါတယ် ဒီမှာ နှင့်ရောင်းသောဤသည်အခြားတ ဦး တည်း ဒီမှာ အတူတူ။ ပထမတစ်ခုမှာ 900W နှင့်အများဆုံးလိုအပ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်ပြီးဒုတိယတွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်မီနူး ၈ ခုနှင့်စွမ်းရည် ၅ လီတာပါဝင်သည်။
La Moulinex အမှတ်တံဆိပ် ၎င်းတွင်မီးဖိုချောင်စက်ရုပ်များ၌အရောင်းရဆုံးရောင်းအားများထဲမှအချို့သောမော်ဒယ်များလည်းရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာစွမ်းရည် ၃.၆ လီတာပါသောစာအုပ်တစ်အုပ်နှင့်စာရွက်စာတမ်းစာအုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသောအလိုအလျောက်အစီအစဉ် ၅ ခုတို့ဖြစ်သည် ဒီမှာ.
၀ ယ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသင့်သည့်အရာကိုသာမကအရောင်းရဆုံးမော်ဒယ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါတွေအားလုံးကိုသိပြီးရင်အားသာချက်တွေကိုပဲအာရုံစိုက်ရမယ်။
ပြီးတာနဲ့ပြီး သင့်မှာသန့်ရှင်းရေးအတွက်များများစားစားမရှိဘူး၊ ပြီးတော့သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာထက်ပိုနေလိမ့်မယ် အမြဲတမ်း။
အကယ်စင်စစ်ဤအမှုအပြီးပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏တစ်နေ့တာသို့ပေါင်းစည်းဖို့သူတို့ကိုရှေ့ဆက်ပေးပြီလိမ့်မယ်! မီးဖိုချောင်စက်များကသင့်ကိုအချိန်တိုင်းကူညီလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » မီးဖိုခန်း » မီးဖိုချောင်စက်ရုပ်ကိုဘယ်တစ်ခုရွေးသင့်သလဲ။